Республика Коми сократила площади под выращивание картофеля — Картофельная Система
Jamhuuriyadda Komi Republic ayaa yareeysay aagagga loogu talagalay baradhada
Komi, dhulka lagu beero dalagyada beeraha ee goosashada 2020 ee ururada beeraha ayaa hoos u dhacay 7% marka loo eego sanadkii la soo dhaafay, warbixinnada Komistat ayaa sidaas sheegay.
Wasaaraddu waxay daabacday natiijooyin horudhac ah oo ku saabsan abuuridda dalagyada gu'ga ee ay sameeyeen hay'adaha beeraha sannadkan.
Sida laga soo xigtay xog hordhac ah, abuuridda baradho ayaa kala badh hoos u dhacay, khudradda dhulka banaan ayaa hoos u dhacay 83%.
Hay'adaha qaar ayaa gabi ahaanba iska daayay beerin dalagyadaas, inbadan ayaa dhimay. Dhulka ku yaal dalagyada daaqa ayaa hoos u dhacay ku dhawaad ​​2 kun oo hektar (6%).
Source: Hay'ada Territorial ee Adeegga Tirakoobka ee Dawladda Dhexe ee Jamhuuriyadda Komi
Tags: baradho korayaJamhuuriyadda Caynyareynta meelaha baradhada
Beerista khudaarta iyo baradhada ay duufaanta ku waxyeelloobey Primorye
Ukraine waxay qorsheyneysaa inay kordhiso wax soo saarka warshadaha ee baradhada
Aqoonta ayaa fure u ah soosaarka guusha iyo faaiidada leh